Ku hubi Istaraatiijiyadda Mawduucaaga Google Search Console | Martech Zone
Khamiis, Maarso 5, 2009 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Dad badan baa og Raadinta Raadinta Google soo gudbinta goobta iyo xaqiijinta aalado faylasha, Sitemaps iyo tusmaynta. Dadku kuma filna inay adeegsadaan tirakoobka raadinta si ay u helaan istiraatiijiyad cad oo ku saabsan boggooda internetka.
U soco Istaatistikada> Weydiimaha Raadinta Sare waxaadna heli doontaa shabakad xog qurux badan leh:
Dhinaca bidix ee shabakadu waa Su'aalaha Raadinta Sare loogu talagalay bartaada. Tani waa liistada ereyada ugu muhiimsan ama jumladaha oo ay la socdaan meesha boostadaada ama boggaaga natiijada.
Dhinaca midig ee shabakadu waa ereyadii dhabta ahaa ee jiray guji-dhex mara oo ay weheliso sicirka gujintooda (CTR). Tani waa macluumaad aad u fiican!
Kuwani waa ereyada furaha ah ee aad rabto shirkaddaada, bogga ama balooggaaga in la muujiyo? Haddii kale, waxaad u baahan kartaa inaad dib uga fikirto waxyaabaha aad ka kooban tahay oo aad bilowdo inaad si aad ah ugu sii adkeysato.
Haddii lagugu meeleeyo ereyo gaar ah oo muhiim ah laakiin tirooyinka aad riixdid-aad uma fiicna, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeysid Cinwaannadaada Boostada iyo soo-celinta boostada iyo sharraxaadda meta). Tani waxay ka dhigan tahay inaadan haysan cinwaano iyo waxyaabo kugu kalifaya - dadku way arkayaan iskuxirkaaga laakiin kuma gujinayaan.
Kala saarista si fiican natiijada raadinta ma ahan dhamaadka shaqadaada. Hubinta in waxyaabahaaga si fiican loo qoray oo dadku ku riixdo xitaa waa muhiim!
Tags: Content Suuqmareegaha googlebogagga sareweydiimaha ugu sarreeyamacalimiin
Bloggers ma noqon karaan Hanti Afraad?
Ma jeclaan lahayd inaad u tagto faahfaahin dheeraad ah sida loo isticmaalo macluumaadkaas. Caawinta GW kaliya maahan mid waxtar leh.